... Seefta ruuxa, oo ah erayga Ilaah (Efesos 6:17).
Nooca kale ee seefta waxaa loo yiqiin Machaira. Tani waxay ahayd seef gaaban. Way fududayd oo askarigii u suurtageliyey inuu si dhakhso leh oo dhaqso leh wax uga qabto. Kaliya waxaad ubaahantahay hal gacan, oo u ogolaatay askariga inuu gaashaanka xirto. Waa seefta labaad oo Bawlos uu halkan kaga sheego warqaddii uu u diray Efesos.